अनशन तोडे पनि गंगामाया अस्पतालमै, कहाँ जाने भन्ने टुंगो छैन ! – Etajakhabar
अनशन तोडे पनि गंगामाया अस्पतालमै, कहाँ जाने भन्ने टुंगो छैन !
काठमाडौं। छोराको हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्दै आउनुभएकी गंगामायाको अनशन शुक्रबारबाट तोडिएको छ । उहाँ वीर अस्पतालमा अनशन बस्नुभएको थियो ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले जुस खुवाएर अनशन तोडाउनुभएको हो । त्यसअघि कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङद्वारा हस्ताक्षरित २ बुँदे पत्र पनि गंगामायालाई दिइएको थियो ।
पत्रमा २०७२ असोजमा जनाइएको ५ बुँदे प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ । साथै गंगामायाले र सरकारले तोकेको प्रतिनिधि रहेको अनुगमन समिति बनाउन त्यसको अनुगमन गरी प्रतिवेदन बनाउने पनि पत्रमा उल्लेख छ ।
कानुनमन्त्री तामाङले गंगामायाको अनशन तोडिएको र गंगामायाले यसअघि गरिएका सहमति पालना गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको जनाउनुभयो । ‘विगतका सहमति पालना नभए फेरि पनि अनशन बस्छु भन्नुभएको छ, सरकार यसबारे गम्भीर छ’ –तामाङले भन्नुभयो ।
गंगामायाको अनशनलाई नजिकबाट हेर्दै आउनुभएका र उहाँको जीवनरक्षाका लागि आवाज उठाउदै आउनुभएका नेपाल मानव अधिकार संगठनका अध्यक्ष इन्द्रप्रसाद अर्यालले गंगामाया अनशन तोडे पनि अस्पतालमै रहेको र उहाँको बसोबासको लागि सरकारले व्यवस्था गरिदिनुपर्ने बताउनुभयो ।
‘उहाँ अस्पतालमै हुनुहुन्छ, कहाँ जाने भन्ने टुंगो छैन, सरकारले ध्यान दिनुपर्छ’, अर्यालले भन्नुभयो– ‘सहमति गरेका बुँदा पुरानै हुन्, सरकारले पूरा गर्न चासो दिनुको विकल्प छैन ।’ याे खबर अाजकाे नेपाल समाचारपत्रमा छ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, आषाढ ३०, २०७५ समय: ७:४२:३५